Vegan Burger - Guzosie ike, Grillable na Kpamkpam Chineke! Burger Vegan - Na-eme Ihe, Grillable na Chi niile! - Ordrs
Super obi na ndochi, na a mix nke ngwa nri na-emepụta na ebube Anụ Mmịkpọ ekpomeekpo.
Gbalịa ndị a mara mma vegan burgers:
MGBE: 30 OZI
AJK: Nkeji 10
Ihe dị iche: Easy
Ọrụ: 4 Ọrụ
Maka ndị anaghị eri anụ:
1 iko (100g) Walnuts
1 iko (164g) Chickpeas (mkpọ, kpochara nke ọma)
1 Tbsp Soy ihendori
2 Tbsp Paspọs Tomato
1 Tbsp Vegan Mayonezi
1 tsp Dijon Mọstad
1/2 tsp Garlic ntụ ntụ
1/2 tsp Onion ntụ ntụ
1/4 tsp Ala Agba Ose
1/2 tsp Anwụrụ Paprika
1/8 tsp Anwụrụ ọkụ Liqu
1 Iko (157g) Couscous (Esie ya, juru n'ọnụ cup) *
1/2 iko (75g) Dị Mkpa Wheat Gluten
Maka ịkọ mmiri:
2 Tee Osisi Anụ Mmịkpọ Vegan
N'ihi na frying:
2 T olive Mmanụ *
Maka Ije Ozi:
Iberibe Ube oyibo
Mpekere Red Onion
Uwe nri nke otu puku Vegan
Tinye walnuts na ihe nhazi ihe oriri na nhazi ruo mgbe ọ ga-ada. Nyefee na nnukwu efere agwakọta.
Tinye chickpeas na igwe nri ya na soy sauce na mado tomato. Usoro ruo mgbe agwakọtara ya. Might nwere ike ịkwụsị ugboro ole na ole iji kpochapụ akụkụ ya wee bido ya ọzọ tupu ọ malite ịgwakọta nke ọma. Nyefee na nnukwu efere a gwakọtara ya na walnuts.
Gbakwunye vegan Mayonezi, hoisin sauce, dijon mọstad, garlic ntụ ntụ, yabasị ntụ ntụ, nnu, ose oji, smab paprika na anwụrụ anwụrụ na efere agwakọta.
Tinye na esiri couscous na ọka wheat dị mkpa ma bido ruo mgbe agwakọtara. Jiri aka gị banye ebe ahụ wee mee ya ka ọ ghọọ nnukwu bọọlụ wee gwakọta ya ihe dị ka ugboro iri abụọ ruo iri atọ ka ọka wit ọka wit wee rụọ ọrụ nke ọma. Youkwesighi ichegbu onwe gị banyere ọka wheat a na-agwakọta ma na-eme ka ha sie ike n'ihi na ọ dịghị ọtụtụ ọka wit eji, ya mere ịgwakọta abụghị nnukwu nchegbu ebe a.
Kewaa n'ime akụkụ anọ wee mepụta akụkụ nke ọ bụla ka ọ bụrụ ụdị burger na aka gị ma ọ bụ gbadaa n'ime onye na-egbu ihe iji mee ka ọ dị mma.
Tinye mmanụ oliv na pan frying wee tinye ya na burgers, na-ehicha n'elu ihe oriri vegan na elu nke ndị burgers. Ighe maka minit 5 na ọkara oke ọkụ wee tụgharịa ha brushing barbecue sauce n'akụkụ nke ọzọ. Maka nsonaazụ kacha mma anaghị atụgharị ndị burgers karịa nke a, ndị burgers na-ejidesi ike mgbe a gbanwere ntakịrị ka o kwere mee, yabụ hụ na pan ahụ adịghị ọkụ nke ukwuu na ha na-ere ọkụ.
Ọ bụrụ n ’isi nri n’ọkụ ma hụ na mmanụ a mịrị amị na ndị burgers agaghị arapara. Ghichaa ndị burgers ahụ na ihendori barbecue wee ghee ya n’otu akụkụ maka nkeji ise wee pịa nke ọzọ maka nkeji ise. Usoro iheomume nwere ike ịdị obere iche na imi mmiri ka ị nwekwara ike kpoo ya na ntị. Ha dị njikere mgbe ha na-acha aja aja nke ọma n'akụkụ abụọ.
Ije ozi na hamburger buns na letus, tomato sliced, pickles, ube oyibo, yabasị uhie na vegan puku akwa agwaetiti.
* A ga-etinye couscous n'ime iko ahụ nke ọma, 157g nke bụ iko iko ọkọlọtọ maka iko nke couscous esi nri bụ maka iko a juru eju, ya mere tinye ya na pịa ya na ngaji wee tinye na ụfọdụ ndị ọzọ .
* Ọ bụrụ na ị na-eghe ihe ndị ahụ na-eme blọgụ na pan wee jiri mmanụ 2 Tbsp. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eme ha na imi ihe mgbe ahụ ị ga-ejide n’aka na mmanụ a na-ete ka etinyere ka ọ ghara ịrapara na ndị na-agba gị.
* Ihe oriri na-edozi ahụ bụ maka burgers patties naanị (gụnyere mmanụ oliv maka ighe na ihe oriri maka ị forụ mmanya) ma wezuga ihe eji arụ ndị burgers.
N'anya Ya Vegan, April 2019